Zuva: Kukadzi 1, 2020
Samsun Logistics Center Kugona Kuwedzera
Chibvumirano che "Samsun Logistics Center Yakavharwa Yakavakirwa Warehouse Project ", chakasainwa naSamsun TSO uye ikapihwa mukana wekuwana rutsigiro pasi pechirongwa che2019 Support Centers (CMDP), chakasainwa nemhemberero. [More ...]
Mukati meiyo chiyero che Ankara-Sivas High Speed ​​Chitima Chikoro; Pa 31.01.2020, TCDD General Manager Ali İhsan Uygun akaenderera mberi achiedza uye kuendesa madhiza uye neyekutengesa matanho enjanji anga achienderera mberi pakati peBüşeyh-Jerköy, kuIzzettin Transformer Center. [More ...]
Meya İmamoğlu: 'Kanal Istanbul Desk Yaparara Tichataura'
İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakapinda "Yekutsigira Kugadzira, Kuronga uye Kushambadzira kweMabasa Anogadzira", iyo inosanganisira machinda kubva kumatuta gumi nematatu. İmamoğlu vakapindura mibvunzo yevatapi venhau mushure memutambo wekuvhura waakaita pamusangano. Imamoglu akati, "Channel Istanbul, [More ...]
Usarega vana vasingasviki paKeçiören tambo yemotokari tara!
Keçiören Meya Turgut Altınok akati, "Munguva yemesitayera, ropeway yedu yakapa mahara masevhisi kuvadzidzi vedu kuti tisazove nevana vasingaone mota yedu muKeçiören ne Ankara. Uyu ndiye isu vana vedu vese vanoda kuona Keçiören maonero eshiri. [More ...]
TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ uye TÜVASAŞ havafanire kusangana
Kuyeuchidza kuti yakarongwa kuunganidza TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ uye TÜVASAŞ pasi padenga rimwe mune iyi sarudzo inosanganisira iyo 2019 Presidential Year Chirongwa, Mutungamiri weTurkey Yekufambisa-Sen Mutungamiriri weNurullah Albayrak akataura kuti ose matatu anotsigirwa haafanire kubatanidzwa. [More ...]
Mujanji weTangi Wakavakirwa paEast Anatolian Fault Line
muzvinafundo Dr. Uğur Doğan akataura kuti ivo vakazoona kuti mugero wechitima mudunhu rePalu mumakore apfuura aive pamusoro peEast Anatolian Fault mutsetse uye akaisa zvikanganiso zvekutarisa zvisirizvo mumugodhi uyu. [More ...]
Akçaray Nhamburiko Enda Kumaminitsi mana
TransportationPark, inotsigirwa neKocaeli Metropolitan Municipality, yakazivisa kuti Akçaray ichapfuura maminitsi mana panguva yekukwira. Ndege, izvo zvichatanga neMuvhuro, Kukadzi 4, zvichabvumidza vagari kumirira zvishoma pane chiteshi. Matura anozopfuura panguva dzakabatikana, [More ...]
56 Percent Hike kuenda kuEurasia Tunnel Toll
Avrasya Tunnel Kuvaka uye Investment Inc. Zvinoenderana neshoko rakaitwa pawebsite, iyo yeEurasia Tunnel nzira-imwechete inosvika makumi mana nemazana mana nemakumi mana, TL yemotokari, inoshanda saFebruary 1, 2020, 00:00. [More ...]
Nhasi munhoroondo: 1 February 1926 Ankara Gazi Station inovhurwa
Nhasi muNhoroondo 1 Kukadzi 1926 Ankara Gazi Station yakavhurwa. 1 Kukadzi 1930 Kayseri-Sarkisla mutsetse (130 km) yakaiswa mushumiro. Iye contractor wacho aive Emin Sazak. 1 Kukadzi 1932 Malatya-Fırat (30 km) mutsara uri kushanda [More ...]